Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पप्पुले जिम्मा लिएको पर्साको तिलावे पुल जीर्ण – Emountain TV
पर्सा, ३१ भदौ । पर्साको ग्रामीण क्षेत्र र सदरमुकाम वीरगंजको सेतुको रुपमा रहेको बिन्दवासिनीस्थित तिलावे पुलको अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको छ । नयाँ पुल निर्माण गर्ने समयअवधि सकिँदा पनि एउटा पिलरको संरचना बाहेक केही निर्माण भएको छैन ।
अर्काेतिर पुलमा हुने जामका कारण आवातजावन गर्ने यात्रुहरु आजित भएका छन् । पुलमा हुने अत्यधिक भारले जोखिम पनि बढेको छ ।
२०५१ सालमा उद्घाटन पश्चात संचालनमा आएको पर्साको यो फलामे तिलावे पुल अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । यस पुलबाट दैनिक हजारौँ सवारी साधन र यात्रुको आवातजावात हुने गर्दछ । लगभग २५ बर्षपछि अहिले यो पुलको पायाहरु बिग्रिएका छन् । यसमा प्रयोग भएको अन्य फलामजन्य सामाग्री खियालागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
ठुलो सवारी साधानहरु पुलबाट आवागमन गर्दा जुनसुकै बेला ठुलो दुर्घटना हुने जोखिम देखिन्छ । पुलकै कारण दैनिक घण्टौँसम्म जाम हुने गरेको सर्वसाधारण यात्रुहरुको गुनासो छ ।
गत जेठमा जाममै परेर उपचारका लागि जाँदै गरेका एक जना गर्भवती महिलाको मृत्यू भएको थियो । तत्पश्चात केही दिनका लागि पुलको डाईभर्सन निर्माण गरी सवारीको चापलाई घटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर अषाढ र श्रावणमा आएको बाढीले सो डाईभर्सन बिग्रीएपछि समस्या फेरि जस्ताको तस्तै भएको छ ।
यो पुल पुननिर्माणका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको भए पनि काम अघि बढ्न नसक्दा सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
चार्डपर्व अगाडि नै डाईभर्सन बनाई तत्कालका लागि राहत प्रदान गर्ने काममा लाग्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका १९ का वडा अध्यक्ष सन्तोष तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
यता, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई समस्या सामाधानका लागि आठ नौ महिनादेखि निरन्तर ताकेता गरिरहेको बताउनु हुन्छ । निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले एक वर्ष भित्र नबनाए ठेक्का रद्द गरिने तयारी गरिएको छ।